Yokutakula - kuyinto ukucutshungulwa selivele lisetshenziselwa emoyeni usebenzisa idivayisi ekhethekile. Le nqubo ingathatha kakhulu ukunciphisa izindleko energy. air ukushisa yidivayisi iyasiza ukuthi kunezinzuzo ezithile futhi yenza imisebenzi eminingana, kuye ngokuthi yisiphi isikhathi sonyaka.
Ngakho, wethule kudivayisi kunezinzuzo ezifana:
- kahle (emoyeni recuperator sisebenzisa amandla kakhulu esingaphansi conditioner);
- ukusebenza kahle eliphezulu;
- usayizi ezincane (konke kuncike izidingo zakho), ukusetshenziswa ezimbonini, ungakhetha imodeli ezinkulu;
- kungenzeka izakhiwo luyimfihlo futhi efulethini umoya emaphakathi;
- kungenzeka ngokusebenzisa ama-apharathasi ebusika (for amalahle emoyeni) ihlobo (lwaluyophola), kungabi namandla lutholakala;
- kungenzeka self-inhlangano izindawo;
- the umzimba nokushisa inikeza inflow futhi outflow umoya, okungukuthi, uthola ukupholisa ezengeziwe zemvelo egumbini;
- izinkomba zezempilo ezinhle.
Namuhla emakethe imikhiqizo kagesi inganikeza inani elikhulu onobuhle amadivayisi lapho ungase ukwazi khona ukukhetha idivayisi ezifanele. Ngakho kukhona lezi zinhlobo ukushisa:
- amanzi recirculation;
Yini izinto ezidingekayo womshini idivayisi?
Uma ufuna ukuba baveze ukushisa ngoba indlu nge siqu sakhe, khona-ke isinyathelo sokuqala sokubutha izinto ezidingekayo kanye namathuluzi. Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi akudingeki zisetshenziswa ezibizayo awudingi. Yakha design kungaba kusuka edayisa izinsimbi materials.
- metal ishidi ukujiya ezincane (kungenziwa lashukumisa);
- emapheshana ka corks lobuchwepheshe (for the uzimele);
- sealant kokungathathi hlangothi;
- MDF (izakhiwo umzimba imoto). Ngenjongo efanayo ungasetshenziswa ithini ibhokisi ajwayelekile usayizi predetermined khathi
- Flanges for amapayipi.
Yiqiniso, nawe kudingeka ukulungiselela amathuluzi: cutting metal imithi, isikudilayiva, amantongomane imishudo, ngezikulufo noma ezinye fasteners.
Kudivayisi inqubo Ukukhiqiza
Kulesi sihloko sizofunda ngokuthi singakugwema kanjani ukwenza umoya plate recuperators. Bangabaholi elula ukusebenzisa nokukhiqiza. Ngaphezu kwalokho, kusukela izinto ngalo ukuba ngumsebenzi emsebenzini umsebenzi, banalo lwenani elincane. Ngakho, kufanele zonke izenzo ezenziwe ngokulandelana:
1. Okokuqala, kubalulekile ukuthola ubukhulu zedivayisi, njengoba le onqumayo ukuthi ububanzi nobude kuyodingeka plate. Ngaphambi kokuqala umsebenzi, kuyinto efiselekayo ukwenza umdwebo emshinini iphepha futhi wenze zonke izibalo ezidingekayo kusengaphambili.
2. Manje uqhubekele ipuleti ahlabayo. Ubukhulu Standard element ngayinye 20 * 30 cm. Uma kukhona onawo kukhona metal, ungasebenzisa PCB noma polycarbonate. Sicela uqaphele ukuthi zonke izinhlangothi plate okufanele kuqonde kahle, ngakho phakathi kwenqubo ahlabayo, musa ukusheshe. Uma isikele ukwenza le nqubo kungasebenzi kahle, sebenzisa i-jigsaw kagesi nge hacksaw. Kulokhu, emaphethelweni dub ayidingekile.
3. Eminye wenza uhlaka okuyinto efakwe phakathi amapuleti. I ukushuba isakhiwo esinjalo kumele singeqi 3 mm. Qaphela ukuthi udinga ukushiya igebe encane phakathi amapuleti (mayelana 4 mm).
4. Kulesi sigaba, lo umzimba emoyeni ukushisa kungaba uhlanganiswe ngokugcwele. Ukuze nokubopha izakhi usebenzisa kokungathathi hlangothi uhlobo sealant, ngoba ngeke nje nesandla rusting futhi ukugqwala metal. Uma fixative bomile ngokuphelele, beka divayisi bezinhlamvu lelungiselelwe. Qaphela ukuthi kubalulekile ukuba abeke heater (uvolo ikakhulukazi okumbiwa phansi) ukusebenza kahle ukusetshenziswa yangaphakathi odongeni ebusweni ibhokisi kudivayisi.
5. Uma kwenzeka-ke kuyadingeka ukuba bayamba umgodi ku ozofakwa phakathi Flanges for axube kudivayisi kuya Amapayipi emoyeni. Zonke imifantu kufanele luphathwe abicah sealant.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela yokwakha emoyeni ukushisa ngezandla zakhe. Nokho, kufanele lisetshenziswe ngendlela efanele. Ngokwesibonelo, umshini usebenza ngesisekelo amapuleti ingase embozwe iqhwa lapho izinga lokushisa komoya lize liba ngaphansi kwe-degree 10. Ukuze le nkinga angase fixed kalula ngaphakathi emshinini, zama ukufaka inzwa ekhethekile iyokuthakazelisa amathonsi ingcindezi.
Ukuze Ubuningi bamahora ukuhlukanisa umsindo idivayisi yokusebenza ngaphakathi kwebhokisi unamathisele fiberglass noma amaminerali uvolo. Lezi zonke izici ukukhiqizwa nokusetshenziswa amadivaysi kuboniswe. Ngikufisela inhlahla!
Ngocingo - plastic noma ngensimbi?
Kulokho futhi kanjani iphepha